प्रदेश १ को नाम सगरमाथा कि कोशी ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख २०, २०७५ समय: ११:२६:३६
मोरङ । केही दिनयता प्रदेश नम्बर १ बिभिन्न कारण चर्चामा रहेको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी मोरङको बिराटनगरबाट सुनसरीको ईटहरीमा सारी स्थायी राजधानी बनाउने तयारी भईरहेको समाचार सार्बजनिक भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै प्रदेशको नाम कोशी या सगरमाथा राख्नु उपयुत्त हुने प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद ओलीको अभिब्यत्तिले फेरी प्रदेश १ लाई तताएको छ ।
किरात,लिम्बुवान लगायत बिभिन्न जातजातिहरुले समेत पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्न बिभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यो अभिब्यत्तिले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानी तोकिनेबारे भएको ढिलाईप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार झापाको दमकमा आयोजित कार्यक्रममा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की समेत सहभागी कार्यक्रममा उनले ‘हाम्रोमा विशाल कोशी छ, संसारकै सर्वोच्च सगरमाथा छ, तीनै नाम राखौँभन्दा कतिलाई असजिलो लागेको होला, तर, यो बिषय चाँडै समाधान गर्नुपर्छ भन्दै उनले कोशी या सगरमाथा नाम राख्न उचित भएको घुमाउरो पारामा संकेत गरेका थिए । ओलीले आफनो गृहनगर समेत रहेको दमकमा आएर प्रदेशको राजधानीको पछि नलाग्न समेत आग्रह गरेका थिए । उनले १ नम्बर प्रदेशको राजधानी जहाँ भए पनि ब्यापारिक हबको रुपमा दमकको विकास गर्ने बताए । विभिन्न शहरमा प्रदेशको राजधानी माग गर्दै आन्दोलन भइहेको उल्लेख गर्दै दमकलाई भने त्यसतर्फ नलाग्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रदेशको नाम के ?
देश संघियतामा प्रबेश गरिसकेको छ । सातवटा प्रदेश मध्ये एक प्रदेशको नामकरण समेत भईसकेको छ । अन्य प्रदेशमा नाम र स्थायी राजधानीका बिषयमा बिवाद कायमै रहेको छ । हरेक दृष्टिकोणले समृद्ध मानिएको प्रदेश नम्बर १ मा बिश्वको अग्लो सगरमाथा देखि होचो ठाँउ केचनाकवल समेत रहेको छ । दर्जनौ हिमश्रृखंला सप्तकोशी नदीलगायत बिभिन्न जातजातिको ईतिहास बोकेको यो प्रदेशमा किरात र लिम्बुवानको समेत आफनै इीतहास रहेको छ । प्रदेशको नामाकरणका लागी नाम खोज्न कुनै आईतबार कुर्नुपर्ने अबस्था नै छैन ।
कुनै जातजाति,बर्ग,धर्म र समुदायका आधारमा भन्दा पनि सबैलाई उपयुत्त हुने किसिमको साझा नाम राख्न सके सबैले अपनत्व महशुस गर्न सक्नेछन । तसर्थ सबैले आफनो मागलाई छोडेर सबैको साझा नामका रुपमा कुने एक नामलाई प्रदेशको नाम राख्न सके बेश हुने छ । लोकतन्त्र पछि आफनो माग राख्ने अधिकार सबैलाई उत्तिकै छ । चित्त नबुझेमा आन्दोलन गर्ने अधिकार पनि छ तरपनि सबैको साझा नाममा सहमति गर्नु चाँहि उत्तम बिकल्प देखिन्छ ।